कसरी एक वेब डिजाइन बजेट बनाउन सुझाव र संसाधन | क्रिएटिव अनलाइन
कसरी एक वेब डिजाइन बजेट बनाउन सुझावहरू र संसाधनहरू
लुआ लौरो | | वेब डिजाइन
सब भन्दा जटिल कुरा जब वेब डिजाइन को दुनिया मा काम गर्न को लागी हुनु पर्छ बजेट बनाउनुहोस्। यो लिनको लागि सब भन्दा जटिल कदम हो र त्यो एक हो जुन हामीलाई कामको दुनियाको नजिक ल्याउँदछ र हामीलाई विद्यार्थीबाट टाढा लैजान्छ। र हामी सबै एउटै कुरामा श doubt्का गर्छौं: के म धेरै तिर्छु? मैले के चार्ज गर्नु पर्छ? म यो कसरी लेख्ने?
Creativos अनलाइनमा अब हामी यही समस्यालाई सम्बोधन गर्छौं तर ग्राफिक डिजाइनको क्षेत्रमा, र हामीले देख्यौं कि यी पोष्टहरू तपाईंको लागि ठूलो सहयोगी छन्। यस कारणले मैले यस प्रकारको लेख्ने निर्णय गरें गाईड कसरी एक बनाउन मा वेब डिजाइन उद्धरण, जुन तपाईंलाई आशा छ कि तपाईंलाई उपयोगी छ याद गर्नुहोस् कि तपाईले पोष्टको अन्त्यमा टिप्पणी सेक्सनमा टिप्पणी गर्न सक्नुहुन्छ।
1 वेब डिजाइन बजेटलाई प्रभाव पार्ने कारकहरू
1.5 ग्राहक परिवर्तनहरू
1.6 ग्राहक आकार
2 वेब डिजाइन उद्धरणको सेक्सन
3 संसाधनहरू तपाईलाई वेब डिजाइन बजेट लेख्न सहयोग पुर्‍याउँछन्
वेब डिजाइन बजेटलाई प्रभाव पार्ने कारकहरू
वेब "लेयरब्याक": त्यो सामग्री प्रबन्धक बिना नै हो। तपाईले HTML, CSS र PHP कोड टाइप गर्नुपर्नेछ तपाईको साइटमा प्रत्येक सेक्सन राख्न, यसको उपस्थिति निर्धारण गर्नुहोस्, आदि। ग्राहक, पृष्ठको सामग्री परिमार्जन गर्न को लागी, त्यसो गर्न (धेरै अनौंठो) कोडको बीचमा नेभिगेट गर्न सिक्नुपर्नेछ वा हामीलाई अपडेट गर्न कोट अनुरोध गर्न आउनुपर्नेछ।
वेब CMS को साथ (WordPress, Prestashop, Magento, Joomla ...): सामग्री प्रबन्धकको साथ। यस तरीकाले, ग्राहकसँग सहज र सहज प्रशासन प्यानल हुनेछ जहाँबाट तिनीहरूले हाम्रो ध्यानको आवश्यकता बिना नै उनीहरूको आफ्नै सामग्री अपडेट गर्न सक्दछन्। हो, तपाईं हामीलाई सीएमएस संस्करण अपडेट गर्दा, प्रकार्यहरू समाहित गर्दै, आदि चाहिन्छ।
स्क्वाड free: धेरै असामान्य अवस्था। हामी टेम्पलेट स्थापना र आधारभूत को अनुकूलन (जस्तै ग्राहक लोगो) को लागी शुल्क लिने छौं।
नि: शुल्क टेम्पलेट निजीकृत: पनि, दुर्लभ। हामी अघिल्लो सेक्सन प्लस वेबको र of्गको अनुकूलन, सामग्रीको लेआउट (फन्ट, आकार, मार्जिन ...), आदिबाट समान शुल्क लिनेछौं।
प्रीमियम टेम्प्लेट: सब भन्दा सामान्य। हामीले टेम्पलेटको लागत, यसको स्थापना र आधारभूतहरूको अनुकूलन शुल्क लिन पर्छ।
स्क्वाड प्रिमियम अनुकूलित: सब भन्दा साधारण। अघिल्लो सेक्सनमा के भनिएको थियो, वेब र colors्ग अनुकूलन, सामग्री लेआउट, विशिष्ट विशेष तत्व (स्लाइडर ...) प्राप्त गर्न एक प्लगइन को स्थापना जोड्नुहोस्।
डिजाइन सुरू देखि नै: त्यो हो, शुद्ध एचटीएमएल र सीएसएस कोड टाइप गरेर र फोटोशपमा सबै ग्राफिक तत्वहरूको डिजाईन। यो सब भन्दा महँगो विकल्प हो, स्पष्ट रूपमा हामीले गरेको समयको कारणले।
बढी गर्न सेक्सनहरू, उच्च बजेट। तार्किक, सही?
को लागत फोटोग्राफहरू वेब को ग्राहक द्वारा वहन गरिनेछ। यो शुरूबाट नै स्पष्ट बनाउनु पर्छ। र यो उस्तै छैन यदि हामीले फोटोहरूको स्टकमा छविहरू खोज्नु पर्छ (हामी यसको लागि शुल्क लिनेछौं) यदि ग्राहकले गर्छ र हामीलाई पठाउँदछ भने।
भाषा: दुई वा तीनमा गर्नु भन्दा एक भाषामा वेबसाइट बनाउन एकै छैन। आदर्श रूपमा, यो सँधै क्लाइन्ट हो जसले हामीलाई अनुवादित पाठहरू प्रदान गर्दछ।
कति कम समय ग्राहकले हामीलाई वेब सिर्जना गर्न छोड्छ, छिटो हामी काम गर्नुपर्नेछ र अधिक खर्चिलो प्रोजेक्ट हुनेछ।
ग्राफिक डिजाइन मा जस्तै, बजेट को प्रारम्भिक मूल्य मा यो संकेत गर्न राम्रो छ नि: शुल्क संशोधनहरूको संख्या (ग्यारेन्टीको रूपमा) कि हामी चिन्तित छौं कि ग्राहकले गर्न सक्दछ। एक पटक त्यो संख्या नाघ्यो, हामीले हामीले संकेत गरेको रकम स collect्कलन गर्नुपर्नेछ। केहि व्यक्तिहरू, प्रत्येक संशोधनको लागि चार्ज गर्नुको सट्टा, परिवर्तन गर्न यसले लिने घण्टाको संख्या लिन्छ।
यो बहु-मल्टिनेसनलको लागि एक पृष्ठ बनाउनु भन्दा, आफ्नो साहसिक कार्य शुरू गर्ने सानो स्वरोजगारको लागि वेबसाइट बनाउन समान छैन।
वेब डिजाइन उद्धरणको सेक्सन
सबै भन्दा पहिले: ग्राहक डेटा, तपाईंको डाटा, मिति, इनभ्वाइस नम्बर ...
विकास प्लेटफर्म र उपकरणहरू
डिजाइन र रूपरेखा
होस्टिंग र डोमेन
SEO, SMO, SEM ...
प्रशिक्षण र मद्दत
संसाधनहरू तपाईलाई वेब डिजाइन बजेट लेख्न सहयोग पुर्‍याउँछन्
Creativasfera वेब बजेट मोडेल
वेब डिजाइन बजेट मोडल (२०० from बाट)
एक सम्झौताको उदाहरण, राम्रोसँग विकसित र "अनौपचारिक"
वेब विकासको लागि दरहरू र बजेटहरू
बजेट तयार गर्दा सुझावहरू
थप जानकारी - कसरी ग्राफिक डिजाइन को लागी बजेट सुझावहरू र संसाधनहरू
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » वेब डिजाइन » कसरी एक वेब डिजाइन बजेट बनाउन सुझावहरू र संसाधनहरू
धेरै चाखलाग्दो, तथापि मलाई लाग्छ कि यो एकदम महत्त्वपूर्ण चीज थप्न आवश्यक छ: साइटको विकास हुन लागेको समयको विश्लेषण गर्नुहोस्। कहिलेकाँही ठेकेदारसँग सबै कुराको तयारी हुँदैन, वा कसैले मध्यवर्ती निर्णयलाई प्रभाव पार्छ र त्यसले उल्लेख्य बजेटमा ठूलो परिवर्तन गर्दछ। संक्षिप्तमा, म विश्वास गर्दछु कि हामीले सधैं सुरुदेखि नै विश्लेषण गर्नै पर्दछ जुन यो ग्राहकले हामीलाई साइटको निर्माण बाहिर (थप) लिन सक्दछ।
नोरियाकीलाई जवाफ दिनुहोस्
धेरै साँचो। हाम्रो अन्तर्ज्ञान एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, र यो थाहा छ कि ग्राहकलाई जुन उसले चाहेको कुराको धेरै स्पष्ट विचार राख्छन् भनेर व्यवहार गर्ने काम बिभिन्न अवधारणाको बीचमा नेभिगेट गर्नेसँग व्यवहार गर्ने जस्तो छैन। समयको सही हिसाब गर्न यत्ति गाह्रो छ ...
ओर्बालालाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो अनुभवबाट म भन्न सक्छु कि हरेक ग्राहक फरक छ। लेखमा वर्णन गरिएका सामान्य विचारहरू ठीक छन्, तर अन्तमा यो हाम्रो आफ्नै अनुभवले हामीलाई सफलता वा असफलतातिर डोर्‍याउँछ।
म काम गर्दै गरेको सबै बर्षहरूमा, धेरै थोरै ग्राहकहरूले मलाई आवश्यक सबै चीजहरू दिएका छन् (लोगो, पाठ, फोटो, आदि) समयमा। एक कामको तरीकाको साथ धेरै सख्त हुन सक्छ, तर त्यसपछि वास्तविकताले तपाईंलाई थप्पड दिन्छ र यदि तपाईं अन्तमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले प्रत्येक ग्राहकलाई अलि बढी रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ ...
जोसेकाबेलोनेटलाई जवाफ दिनुहोस्
वेब डिजाइन लेन भन्यो
वेब पृष्ठ डिजाइन गर्न बजेट बनाउन धेरै राम्रोसँग बुँदाहरू कभर गरियो। मोबाईल र ट्याब्लेटहरूको लागि वेब डिजाइनमा अलि अलि डिब्ले गर्न आवश्यक पर्दछ, जसले यी उपकरणहरूबाट अधिक र अधिक भेटहरू प्राप्त गर्दैछ।
वेब डिजाइन लेनलाई जवाफ दिनुहोस्
आर्थिक वेबसाइटहरू भन्यो
मेरो बजेटको लागि मुख्य सल्लाह के सबै विवरण पनि समावेश छ? कसरी डिजाइनको विवरण, भुक्तान र वितरण समय फारामहरू स्थापना गर्न, ताकि सबै कुरा स्पष्ट भए दुबै पक्षहरूको लागि काम सुरु गर्नु अघि र यसैले पछि गलतफहमीहरूबाट जोगिन। कागजातमा सबै लेखी छोड्नु उत्तम हुन्छ जुन हामी दुबैसँग छ र डिजाइन प्रस्ताव र बजेट दुवै समावेश गर्दछौं। म उनीहरूको योगदानका लागि बधाई दिन्छु, उनीहरूले यो प्रक्रिया मेरो लागि धेरै सजिलो बनाएको छ, जुन सुरुमा गाह्रो देखिन्छ तर अन्त्यमा के गर्नु पर्ने हुन्छ। मेक्सिकोबाट अभिवादन।
सस्तो वेबसाइटहरूमा जवाफ दिनुहोस्
ट्यूटोरियल: छिटो इलस्ट्रेटरको साथ टाइपोग्राफी छान्नुहोस्
मेलिसा ब्यालेस्टेरोस वा कसरी ब्रुस टिमको चित्रण गर्ने र मर्ने प्रयास गर्दै